Fampandrosoana ny tetikasa Port of Los Angeles Pier 400 - Blog Ellicott Dredges
Tetikasan'ny seranan-tsambon'i Pier 400 any Los Angeles mandroso amin'ny dingana faharoa;
Jona 1, 2016
Great Lakes Dredge & Dock dia mampiasa «dricge» Ellicott® Brand "Florida" hitrandraka 50 tapitrisa metatra toradroa feno tany
Source: Famerenana ny harena ankibon'ny tany momba ny harena ankibon'ny tany sy ny fanamboarana ary ny famerenanana ny dredging iraisam-pirenena
Tamin'ny 18 Aogositra 1997, nankalaza ny tetik'asa Pier 400 ny Port of Los Angeles sy ny US Engine Corps of Engineers, ny tetikasa dredging and landfill lehibe indrindra any Etazonia, namorona fantsona lalindalina kokoa hahafahan'ny sambon-kaontenera lehibe sy fitaterana lehibe indrindra mankamin'ny Port's Piers vaovao 300 sy 400.
Ireo fitaovana namboarina avy amin'ny fanamboarana fantsona dia ampiasaina hanampiana saika 600-hektara (242.8 hektara) ho any Port ho fanampiana hametrahana ilay gony efa niandrasana nifindra namakivaky ny Port tamin'ny taona 20 manaraka. Mitentina $ 300MM ny fisarahana eo amin'ny roa tonta eo anelanelan'ny Stage 1 sy Stage 2.
Ny ben'ny tanànan'i Los Angeles Richard J. Riordan dia nilaza fa: “Ny Seranan'i Los Angeles dia iray amin'ny firavaka satro-boninahitry ny Tanànantsika, mamorona asa, manohana ny toekarena eo an-toerana, mampifandray antsika amin'izao tontolo izao. Ankehitriny isika dia mankalaza ny fanitarana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny seranan-tsambon'i Etazonia - sy ny fanavaozana izay hahatonga antsika any amin'ny avo kokoa. "
Brig. Ny Jeneraly J. Richard Capka, komandy, ny tafiky ny injeniera ao amin'ny tafika atsimo Pasifika dia nanamarika fa: "Ny mpandrafitra avy amin'ny seranan'i Los Angeles sy ny Corps dia arahabaina amin'ny fiantohana fa ny fampitoviana ilaina amin'ny fahombiazana - toekarena, injeniera ary ny tontolo iainana - voalanjalanja tamin'ity tetikasa ity. Izahay dia mirehareha amin'ny anjara andraikitray amin'ny fampandrosoana ity seranan-tsambo ity, miverina hatramin'ny faramparan'ny taona 1800 miaraka amin'ny fananganana ny Distrikan'ny Corps 'Los Angeles. Manantena ny fanompoana amin'ny taonjato faharoa ho an'ny vahoaka ao amin'ny faritra atsimon'i Kalifornia izahay. ”
Ny fifanarahana I sy I II dia samy nomena ny The Pier 400 Constructors, fiaraha-miasan'ny Great Lakes Dredge & Dock Co. ary ny Connolly-Pacific Co. fifanarahana $ 148.6 tapitrisa no natolotra ho an'ny Stage I tamin'ny Jona 1994. Tafiditra ao amin'ilay tetikasa ny fampandrosoana ny 3 mi. misy fantsona fitetezana vaovao sy malalaka, tavy iray miodina ary 5000 metatra ny velaran'ny faritra atsimon'ny Pier 300 amin'ny Terminal Island.
Ny fanondranana ny 29 tapitrisa yd3 ny akora vokarina amin'ny halalin'ny rano 45 ft ka 63 ft ahafahana mitrandraka fantsom-bidy lalina sy fanaka marobe. Ny fitaovana dredged dia misy ao ambadiky ny dikes rock, mamorona faritra 265-acre (107.3 hektar) ampahany amin'ny tany vaovao antsoina hoe Pier 400, izay hita ao amin'ny faritry ny seranan-tsambo atsimon'ny Nosy Terminal. Ity acreage ity dia misy lalamby tery vaovao mifono vaovao izay hampifandray ny Pier 400 mankany amin'ny Nosy Terminal akaikin'ny sisin-tanin'i Los Angeles - Long Beach. Ny tany vaovao dia miaro avy hatrany amin'ny seranan-tsambo amin'ny onja sy ny onjan-drano.
Great Lakes dia nampiasa ny 36 ″ (914 mm) Eledott® marika dredge "Florida " hanao ny ankamaroan'ny asa amin'ity asa ity. Ilay “Florida", Miaraka amin'ny totalin'ny 16,000 HP (12,000 kW) napetraka, dia voalaza fa ny dredge suction fanapahana lehibe indrindra sy matanjaka indrindra any Etazonia. Izy io dia namokatra hatramin'ny 138,000 yd3 / andro tamin'ity asa ity ka afaka nahavita telo volana mialoha ny fandaharam-potoana i Great Lakes.
Efa mandeha ny dingana II miaraka amin'ny fifanarahana $ 150 tapitrisa nokarakaraina ho vita tamin'ny Janoary 2000. Ny dingana faharoa amin'ilay tetikasa dia hanalalina ny fantsona 63-ft mankany 81 ft, ​​hanitatra fantsona 50-ft ary hamorona fantsona 75-ft-lalina mankany amin'ny ilany atsinanan'i Pier 400, Stage I. Ny 22 tapitrisa yd3 misy fitaovana maloto. hamorona 325-hekitara fanampiny (hektara 131.5).
Ny dredge herinaratra dia navela tany am-piandohan'ny 1980 mba hiasa ao amin'ny faritr'i Los Angeles, toerana izay anorenan'ny Air Quality Control Board ny herinaratra rehetra ho an'ny fitaovana fananganana. Taorian'ny fametahana paompy tohatra teo amin'ilay tohatra 115 metatra nandritra ny fanamafisana ny fantsona tany am-boalohany, ny dredge 34-santimetatra dia ampy hamonoana ny halavirana takiana lava tsy misy paompy booster. Mandritra io tetik'asa io dia hantsaka 18,000 metatra miala ny fantsom-pidirana amoron-dranomasina hatramin'ny famenoana izy. Nandritra ny fananganana ny lalantsara fitaterana, 12,000 metatra ny tsipika fandefasana lava indrindra. Miaraka amin'ny sambo tsy miasa mirefy 184 metatra mitaingina eo amin'ny vodisambo, ny halavan'ny Florida amin'ny ankapobeny dia 450 metatra, mamela malalaka.
Ny fiara fitaterana lehibe dia motera 10,000 HP, motor 13,200 volt Canada General Electric. Tonga amin'ny dredge amin'ny alàlan'ny tariby mavesatra mavesatra mavesatra, ataon'ireo sambo roa.
Ny motera kanadiana dia avy amin'ny fampiharana voalohany an'ny dredge. Ny Ellicott® International dia nanangana ny “Florida", Avy eo nantsoina hoe"Clarence B. Randall“, Ary ny rahavavy iray mitovy asa an-tany nihady tany tamin'ny 1953 ho an'ny fitrandrahana vy any Caland Ore's Steep Rock Canada. Ireo dredge roa dia niasa manodidina ny famantaranandro mba hanala ny metatra toratelo tapitrisa metatra toratelo mahery - lalina mihoatra ny zato metatra. Ny tetik'asa Steep Rock dia mijanona ho tetikasa tokana fitrandrahana dredge lehibe indrindra natao hatrizay. Izy io dia fanomezam-boninahitra ny fenitry ny famolavolana marika Ellicott® fa ny milina fanalahidy dia mbola miasa mandritra ny 40 taona aty aoriana, ary ny rafitry ny vatam-baravarana dia mahazaka ny fanatsarana dredge manaraka voalaza etsy ambony.
Rehefa nanomana ny “Florida”Ho an'ny tetikasa Pier 400 tamin'ny 1997, afaka niantehitra tamin'ny Ellicott® International izy io mba hanomezana angon-drakitra momba ny injeniera tany am-boalohany, 40 taona taorian'ny nanamboarana azy, hanampiana ny fanatsarana an'i Great Lakes amin'ny dredge.
Ny Port dia nikasa ny tranokala ho an'ny fitoeran-javatra, fitoeran-javatra betsaka ary fotodrafitrasa. Ny Tetikasa Pier 400 dia manome tombony lehibe ara-toekarena ao anatin'izany ny fampiakarana ny karama tena izy hatramin'ny $ 24.3 miliara ka hatramin'ny $ 40 miliara. Ankoatr'izay, ny fandraisana anjara amin'ny hetra federaly, fanjakana ary eo an-toerana dia hitombo hatramin'ny $ 12 miliara ka hatramin'ny 19.8 miliara dolara. Ny tetikasa fitrandrahana sy fanariam-pako dia vato fehizoro amin'ny Port Implementation Program 300/400 an'ny Port, programa mitentina $ 650 tapitrisa ahitana tetikasa 24 misaraka. Io no asa lehibe indrindra fanatsarana renivohitra any amin'ny seranan-tsambo amerikanina ary ny tetik'asa fampiroboroboana fatratra ao amin'ny Port ao anatin'ny 90 taona.
Ny Programme Implementation an'ny Pier 300/400 dia mandrafitra ny faritra atsimon'ny Lalambe Alameda, lalàm-by sy lalana fitaterana an-tongotra 20 kilometatra, mampitohy ny seranan-tsambon'i Los Angeles sy Long Beach amin'ny tambajotram-pitaterana iraisan'ny kaontinanta ary mamorona fitaovana haingana sy mahomby hizara entana manerana an'i Etazonia. Ny Seranan-tsambon'i Los Angeles dia iray amin'ny seranan-tsambo be mpandeha indrindra eran'izao tontolo izao ary manompo amin'ny vavahady iraisan'ny US West Coast amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ny Seranan-tsambo 7500 hektara dia misy fotodrafitrasa lehibe 30 amoron-dranomasina 28 kilaometatra izay miompana manokana amin'ny asa fiara, vaky birao, fitoeram-bokatra, maina sy be entana.
Ho fankasitrahana ny maha-zava-dehibe ny seranan-tsambo mankany Los Angeles, ny Tafiky ny injeniera an'ny tafika - manam-pahaizana momba ny injenieran'ny governemanta federaly - dia namorona ny Distrikan'i Los Angeles tamin'ny 1898 hanamorana ny fananganana ny rafitry ny seranan-tsambo. Androany, noho io fanahin'ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa maharitra io, ny Corps dia manohy manampy ny Port miaraka amin'ny fahaizany injeniera, manao ny Port of Los Angeles ho iray amin'ireo seranan-tsambo varotra lehibe indrindra any Amerika.
Nalaina tao amin'ny World Dredging Mining & Construction & International Dredging Review